Studio 7 Headlines, Thursday, February 25, 2016
United States Ambassador to Zimbabwe, Harry K. Thomas Junior, says America shares the desires of the people of Zimbabwe, who want to see a peaceful, democratic, and prosperous Zimbabwe that provides for its people and contributes to regional stability.
Preparations for President Robert Mugabe’s birthday bash in Masvingo province in top gear despite reservations from some Zimbabweans, who strongly believe that the $800,000 party is a waste of money for a nation facing a serious drought.
Some children of war veterans are demanding an apology from Zanu PF deputy Youth League secretary, Kudzai Chipanga, who recently challenged them for a fight saying they were almost good for nothing as they seem to be backing Vice President Emmerson Mnangagwa, who allegedly wants to topple the president.
Zimbabwe First Party takes former Vice President Joice Mujuru’s Zimbabwe People First party to court claiming that Mrs. Mujuru stole their party name.
Highlanders Football Club is set to commemorate its 90th anniversary this weekend.
Today on LiveTalk our hosts of the Women’s Round Table Marvellous Mhlanga Nyahuye and Praxedes Jeremiah will be talking with listeners and experts about the role of Zimbabwean women in politics.